Ederede Marklọ Ọrụ Pen Marker | China Writing Pen welara ink dee Manufacturers, Suppliers
7ML / kalama ejiri mee Gold Powder Agba ink dee N'ihi na Isi iyi tinye Pen Calligraphy Writing Agba sere Graffiti Non Carbon
12 Pcs x Dip Pen Ink (pen anaghị etinye ya).
18ml ewute ntụ ntụ Agba Calligraphy Writing sere Bottled Iyi Pen Pen ink
24 agba dị iche iche, nke enwere ike iji maka ederede, eserese, akara, graffiti.
Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-eji ya.
Na nchapu ntụ ntụ na ink, na-eme ka ederede ma ọ bụ eserese ka mma.
50ML Ezigbo Writing Fountain Pen Ink Glass Bottle Student School Office ọnọde
Inwe àgwà dị elu, kpochapụ nkwụnye ego ink, zere ihe nkwụsị nke mmiri mgbe ị na-ede ihe.
Na-adịghị agbanwe agbanwe, debe ebe ahụ ka mmiri, mee ka ederede dị mfe.
Mmiri na-eguzogide ọgwụ, agba na-adịte aka, ọ nweghị isi pụrụ iche.
Mmanya Mmanya Na - egbu egbu - 25 Nnukwu Mmanya Mmanya Mmanya - Mkpụrụ Acid-Free, Ihicha Ọsọ na Mmanya Na-adịgide Na-adịgide Adịgide - Mkpụrụ Mmanya Na-aba n'Anya Maka Resin, Tumblers, Painting Art Painting, Ceramic, Glass and Metal
Mmanya Mmanya Na-aba n'anya - Ihe I Kwesịrị Knowmara Tupu Start Bido
Iji inks mmanya na-aba n'anya nwere ike ịbụ ụzọ na-atọ ụtọ iji agba agba ma mepụta ndabere maka stampụ ma ọ bụ ịme kaadị. I nwekwara ike iji inks mmanya na-ese ihe ma tinye agba dị iche iche dị ka iko na ọla. Ìhè nke agba pụtara na obere karama ga-aga ebe dị anya. Inks mmanya na-egbu egbu bụ ihe na-enweghị acid, na-agba agba nke ukwuu, ma na-agba ngwa ngwa iji mee ihe na mbara igwe. Inggwakọta agba nwere ike ịmepụta mmetụta dị egwu ma nwee ike ịmelata site na ihe ị dị njikere ịnwale. Gụọ n'okpuru iji mụta ihe ị ga-achọ iji rụọ ọrụ na mmanya na-aba n'anya na ihe ndị ọzọ bara uru gbasara agba ndị a na ndị na-ajụ ase.
30ml karama Glass Ezigbo Writing Isi iyi Pen Ink Refill School Student agụmakwụkwọ Office ọnọde 24 Agba
100% ohuru na elu mma
Akọrọ ichicha Refillable Whiteboard Akara Ink maka School, Office, Pen Factory
Ink na agba na-enwu gbaa, dị mfe nkụ. Agba adịghị mfe ịda.
Tinye ink a na penarị marker pen, a na-ede pen pen enwere ike iji ya rụọ ọrụ. Nke bụ echekwa.
Ọnụ nke karama ink bụ ihe pụrụ iche, nwere ike izere ịwụfu mgbe ị na-agbakwunye ink. nke adaba ma di mfe iji.
Adabara dị iche iche whiteboard itienna.
Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị enyi gị na onwe gị.
Mejupụta Ink naanị, ngwa ndị ọzọ ngosi dị na foto a esoghị.
Na-adịgide adịgide welara Pen Ink dee na Metals, Plastics, Ceramics, Wood, Stone, kaadiboodu wdg
Enwere ike iji ha na akwụkwọ nkịtị, mana ink na-agbapụta ọbara wee pụta n'akụkụ nke ọzọ.
1000ml karama Iyi Pen Pen Inki nke mejupụta Dị Iche Iche nke iko karama
OBOOC na - eburu ọtụtụ ngwongwo kacha mma na pen pen na ahịa taa na 70% gbanyụọ ahịa.
60ml ezigbo Mbadamba Glass Pen ink dee Isi Office agụmakwụkwọ Student Refill Pen ink dee ọnọde School
Karama Theese nke iyi pen ink bụ ezigbo nha iji nwalee ma ọ bụ nwaa. Inye a pere mpe na-abata na karama iko ma nwee ike iji ya mee ihe ozugbo ha tọgbọ chakoo.
25L gbọmgbọm Fountain Pen Ink / Dip Pen Ink maka Obere karama mejupụta
Daalụ maka nkwado ị na-eji ink OBOOC.
Anyị ẹkenam iche iche iche iche nke ink na agba dị ka bottled ụdị na katrij ụdị.
N'oge na-adịbeghị anya anyị malitere ink ink na "Mix Free Ink", nke na-enyere gị aka ịme ọkacha mmasị agba ink naanị gị.